जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस !! | सुदुरपश्चिम खबर
जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस !!
शरीरको साथसाथै, कान सफा गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरू प्राय जसो आफ्नो शरीर सफा गर्दछन् तर कान सफा गर्न बिर्सन्छन्। कान सफा नगर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। कान सफा नगर्दा ठूलो रोगलाई निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंले कान सफा गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि आन्तरिक फोहोर जम्मा भई एक दिन कान दुख्ने समस्या आइपर्छ।
पहिलो तरिका=पहिले आधा कप तातो पानी लिनुहोस् र यसमा एक सानो चम्चा नुन मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा कपासको एउटा टुक्रा भिजाउनुहोस् र त्यस कपासको माध्यमबाट कपासमा भिजाएको पानीलाई कानमा निर्चोनुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि कि पानी राम्रोसँग भित्र जानुपर्दछ। त्यस पछि, कान फर्काउनुहस् र कानबाट सबै पानी निकाल्नुहोस्।
दोस्रो=कानको फोहोर पनि बच्चाको तेलको सहायताले हटाउन सकिन्छ। यसका लागि, तपाईंले आफ्नो कानमा बेबि तेलको केही थोपा हाल्नुहोस् र कपास कपास लगाउनुहोस्। यसले छोटो समयमा तपाईको कानमा जमेको गरिएको कानेगुजीलाई नरम पार्दछ, ताकि कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँदछ।
तेस्रो तरीका=समान मात्रामा हाइड्रोजन प्याराअक्साइड र केही थोपा पानी लिनुहोस् र कानमा राख्नुहोस्। जब यो कानमा राम्रोसँग जान्छ, केहि समय यसलाई छोडे पछि, कानलाई र्फकाउनुहोस् ताकि पानी बाहिर आओस्। ध्यान राख्नुहोस् कि हाइड्रोजन प्याराअक्साइडको मात्रा ३ प्रतिशत भन्दा बढि हुनु हुँदैन। कानको फोहोर पनि सजिलै यस प्रयोग द्वारा सजिलैसँग हटाइन्छ।
चौथो तरिका=कानको फोहोर पनि जैतुनको तेलले हटाउन सकिन्छ। यसको लागि, तपाईंले रातमा कानमा जैतून तेलको केही थोपा हाल्नुहोस्। करीव ३ देखि ४ दिन सम्म यो गर्नाले कानको कानेगुजी नरम हुनेछ र कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँनेछ। (gnewsnepal बाट सभार)
किन दुख्छ कान ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार !!
त्रिदेशीय कप : बंगलादेशविरुद्ध अंक जोड्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा नेपाल !!
स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभाव, हल्का वर्षाको सम्भावना
बैशाख १० गतेसम्म भीमदत्तमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द
विदेशी शक्तिको आडमा संविधान र मूल्य मान्यता मिच्ने काम भयो : प्रचण्ड
डेब्यू सिरिजमै चम्किएपछि कुशलको भारतीय मिडियामा चर्चा !